Inkulumbuso yaseFransi yahlaliswa yedwa emva kovavanyo lwe-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseFransi ezaphulayo » Inkulumbuso yaseFransi yahlaliswa yedwa emva kovavanyo lwe-COVID-19
Iindaba zaseBelgium zokuPhula • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Inkulumbuso yaseFransi uJean Castex
UJean Castex, ogonywe ngokupheleleyo, uya kuvalelwa yedwa kangangeentsuku ezili-10 kodwa uya kuqhubeka nokusebenza.
Inkulumbuso yaseFransi, uJean Castex, uvavanywe ukuba une-COVID-19 ngoMvulo ebusuku, iofisi yakhe yaqinisekisa.
UCastex, ogonywe ngokupheleleyo, uza kuvalelwa yedwa kangangeentsuku ezili-10 kodwa aqhubeke nokusebenza, yatsho iofisi yakhe kwingxelo.
UCastex uvavanye ukuba unayo i-coronavirus emva kokubuya kuhambo olusemthethweni oluya eBelgium.
Inkulumbuso Fransi wafumanisa ukuba intombi yakhe eneminyaka eli-11 ubudala yavavanywa ukuba unayo i-coronavirus xa ebuya eBrussels, apho wadibana khona Inkulumbuso yaseBelgium uAlexander De Croo kunye nabanye abefundisi.
Abaphathiswa abahlanu baseBelgium, kuquka Inkulumbuso uDe Croo, zihlale bodwa njengenyathelo lokhuseleko emva kwesibhengezo sikaCastex, kwaye bazakuvavanywa ngolwesithathu, utshilo isithethi sikarhulumente.
U-Casex, oneminyaka engama-56, ebengekakulungeli ukufumana izitofu zokugonya i-booster UMongameli wase-France u-Emmanuel Macron ukhuthaze njengenye indlela yokuvalwa kwendlela ephunyezwe yi-Austria kunye neJamani ekuphenduleni inani elikhulayo le-COVID-19 kwilizwekazi.
Fransi okwangoku ibonelela ngee-boosters kuphela kwabo baneminyaka engama-65 nangaphezulu, nangona iqumrhu labacebisi liye labongoza ukuba badlulisele kuye nabani na ongaphezulu kweminyaka engama-40.